भु.पू. विद्यार्थी मञ्च आनन्द ज्योति मा वि को अध्यक्षमा अधिकारी - Pokhara Post
भु.पू. विद्यार्थी मञ्च आनन्द ज्योति मा वि को अध्यक्षमा अधिकारी
पोखरा ।भु.पू. विद्यार्थी मञ्च आनन्द ज्योति मा. वि. बेगनासको अध्यक्षमा नवराज अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न मञ्चको प्रारम्भिक साधारणसभा एवं प्रथम अधिबेशनबाट अधिकारी सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
त्यस्तै मञ्चको उपाध्यक्षमा विकास प्रसाद कंडेल, सचिवमा श्रीराम कंडेल, कोषाध्यक्षमा सुशिला अधिकारी सिग्देल र प्रबक्तामा कृष्णराज आचार्य चयन भएका छन । त्यस्तै सन्तोष अधिकारी, अनिल सुवेदी, अर्जुन पौडेल, केशवराज तिवारी, गोमा तिवारी सोती र शोभा कंडेललाई सदस्यमा चयन गरिएको छ ।
प्राध्यपाक बिश्वराज अधिकारी संयोजक र फडिन्द्र मोहन अधिकारी, रुद्रनाथ अधिकारी, लक्ष्मी थापा सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलले निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गरेको थियो । नयाँ कार्यसमितिका सबै पदमा सर्वसम्मत चयन गरिएको हो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं प्रतिनिधीसभा सदस्य खगराज अधिकारीले विकास निर्माणका काममा राजनीतिक गर्न नहुने बताएका थिए । नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका अधिकारीले राजनिति गर्ने नाममा कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरुमा अवरोध गर्ने नहुनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक बिश्वराज अधिकारीले शैक्षिक क्षेत्रमा राजनिती गर्न नहुने भन्दै प्रागिक थलोको गरिमालाई उच्च बनाउन मञ्चले भुमिका खेल्न सक्नु पर्ने बताए । आनन्द ज्योति माध्यमिक बिद्यालयका पुर्व प्रधानाध्यापक फडिन्द्र मोहन शर्मा अधिकारीले बिद्यालयका पुर्व बिद्यार्थी संगठित भएकोमा खुसी लागेको बताए ।
नबराज अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका ३१ का वडा सदस्य पुर्णाखर पाण्डे, नेपाली काङ्ग्रेसका धुर्वराज अधिकारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्ण तिमिल्सिना, राप्रपाका प्रकास सापकोटा, भुपू विद्यार्थी मञ्च आनन्द ज्योति मा. वि. का कोषाध्यक्ष शुसिला सिग्देल, बेगनास बिकास मञ्च पोखराका अध्यक्ष शुक्रराज कंडेल लगायतले बोलेका थिए ।
मञ्चका उपाध्यक्ष बिकास प्रसाद कंडेलले स्वागत गरेको कार्यक्रमको संचालन सचिव श्रीराम कंडेल गरेका थिए । कार्यक्रममा मञ्चलाई सहयोग गर्ने संस्था र ब्यक्तीलाई सम्मान गरिएको थियो भने मञ्चका अजिबन सदस्यहरुलाई आजिबन सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । साधारणसभाबाट अध्यक्ष, सचिब र कोषाध्यक्षका प्रतिबेदन सर्वसम्मत पारित भएका छन् ।